မန်တ‌လေးသား စဈစဈ တှေ တောငျမှ ရရေရောရာ မသိကွတဲ့ တပွ ဆိုတာ – Nyi Ma Lay
မန်တ‌လေးသား စဈစဈ တှေ တောငျမှ ရရေရောရာ မသိကွတဲ့ တပွ ဆိုတာ
By Nyi Ma LayPosted on September 1, 2021
မန်တလေးသူ မန်တလေးသားေ တှက မွပွေငျပျေါက ခရီးအကှာအဝေးကို ပွောတဲ့အခါဖွဈဖွဈ၊ လမျးညှနျတဲ့အခါ ဖွဈဖွဈ ၁ ပွ၊ ၂ ပွ၊ ၃ ပွ…. စသဖွငျ့ ပွောတတျကွတယျ။
မန်တလေးနဲ့ စိမျးတဲ့သူတှကေ အဲ့ဒီ တဈပွနှဈပွတှကေို ဘာပွောမှနျး မသိကွဘူး။ တခြို့က ကွားဖူးနားဝနဲ့ နားလညျမှုလှဲကွတယျ…
မန်တလေး တဈပွဆိုတာ မရမေရာကွီးလိုလို၊ အတိုငျးအဆမဲ့နသေလိုလို၊ အရမျးကွီး ဝေးနသေလိုလို။ မသိသေးသူတှေ သိသှားအောငျ ကနြျောဖတျမှတျသိရှိခဲ့တာလေးတှကေို ပွနျလညျ ဖောကျသညျခပြါမယျ။(မှားတာရှိ ပွငျပေးပါ)
မန်တလေး ၁ ပွ ဟာ တာ ၅၀ ရှိပါတယျ။ အတိအကကြို တာ ၅၀ ရှိတာပါ။ ရှေးမွနျမာ အတိုငျးအတာအရ ‘တာ ၅၀’ ပါ။ ၁ တာ မှာ ၇ တောငျ ရှိပါတယျ။
မွနျမာအတိုငျးအတာ ၁ တောငျဟာ အင်ျဂလိပျအတိုငျးအတာ ၁၉လကျမခနျ့ နဲ့ ညီမြှပါတယျ။ (တခြို့က ၁၈လကျမလို့ ယူကွတယျ)
တာ ၅၀ = အတောငျ ၃၅၀ = ၆၆၅၀ လကျမ = ၅၅၄.၁ ပေ။ ၁ ပွ = ၅၅၄ ပေ ပေါ့ (အနီးစပျဆုံး)
အဲ့ဒီ တဈပွကို တာ ၅၀ က ဘယျက လာတာလဲ?
မွို့ရိုးကနေ လာတာပါ။ မန်တလေးနနျးမွို့ရိုးဟာ လေးထောငျ့စပျစပျပုံသဏ်ဍနျ ရှိပါတယျ။ မွို့ရိုးကို ပစ်စငျ ပွအိုး သူရဲခို သူရဲပွေး ရငျးတား စတာတှနေဲ့ ဖှဲစညျး တညျဆောကျထားကွတယျ။
မွို့ရိုးတဈဖကျဟာ ‘တာ၆၀၀’ ရှညျပါတယျ။ တာ ၅၀ တိုငျးမှာ ပွအိုးတဈခု ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ ပွအိုးနဲ့ တညျ့တညျ့ကို ဦးတိုကျပွီး မန်တလေးလမျးတှကေို ဖောကျထားတာပါ။ (Google map မှာ ကွညျ့ရငျ သိပါမယျ)
ဒါကွောငျ့…တဈပွဟာ တဈလမျး ပါ။ မွို့ရိုးပျေါက တဈပွနဲ့တဈပွ အကှာအဝေးဟာ တဈလမျးနဲ့တဈလမျး အကှာအဝေးပဲပေါ့။ တဈလမျးနှဈလမျးမပွောဘူး တဈပွနှဈပွပဲ ပွောတာ မန်တလေးသား။ (အတူတူကိုး)
မွို့ရိုးတဈဖကျမှာ ၁၂ လမျး ( ၁၂ပွ) ရှိပါတယျ။ မွို့ရိုးနဲ့ ကြုံးကွားက တာ ၂၀၊ ကြုံးအကယျြက တာ ၂၀ နဲ့ လမျးဘေး ပလကျဖောငျး ဘာညာသာရကာက ၁၀တာ လောကျ ရှိတော့ မွို့ရိုးကနေ နောကျထပျ တာ၅၀ အကှာမှာ လမျးတဈလမျး ယူထားတယျ။
အဲ့သဟာကွောငျ့…ကြုံးတဈဖကျစီဟာ ၁၄ လမျး (၁၄ပွ) ရှိပါတယျ။မွောကျဖကျကြုံးလမျးဟာ လမျးနံပတျ ၁၂ပါတောငျဖကျကြုံးဟာ လမျးနံပတျ ၂၆ ပါ ၁၄ လမျး ရှိတယျ။ အရှကြေုံ့းလမျးဟာ လမျးနံပတျ ၆၆ ပါ အနောကျကြုံးလမျးဟာ လမျးနံပတျ ၈၀ ပါ ၁၄လမျး ရှိပါတယျ။
(တခြို့ထငျသလို ကြုံးတဈဖကျဟာ ၂ မိုငျ မရှိပါ။ ၁မိုငျခှဲခနျ့သာ ရှိပါမယျ။)
မန်တလေးသားတှကေ… တဈလမျး နှဈလမျး သုံးလမျးလို့ မပွောဘဲ တဈပွ နှဈပွ သုံးပွ စသဖွငျ့ ပွောကွတယျ။ လမျး နဲ့ ပွ အချေါ အတူတူပါပဲ။ (မွို့ထဲပိုငျး ပွောတာပါ၊ မွို့သဈတှေ စကျမှုဇုနျေ တှထဲမတော့ လမျးနံမ ညျတှဟော ဖွဈခငျြတိုငျး ဖွဈနလေိုကျတာမြား ခြီးပုံ ကွကျယကျထားတဲ့ အတိုငျးပဲ၊ ပနျးနံမယျတှေ၊ ရာဇဝငျထဲက အဘတှရေဲ့ နာမယျတှနေဲ့ ဘယျလမျးဟာ ဘယျနားရှိမှနျး မနျးလေးသားတှကေို မသိတော့တာ၊ ဇာတျပကျြတယျဆိုတာ ဒါမြိုးကို ချေါတာလေ)
မန်တလေး ၁ ပွ ဟာ တခြို့လူတှထေငျသလို မရမေရာ မတိမကြ ဗရမျးဗတာ မဟုတျပါဘူး။
၁ပွ = တဈလမျး = တာ ၅၀ = ပေ ၅၅၀ခနျ့
မန္တလေးသူ မန္တလေးသားေ တွက မြေပြင်ပေါ်က ခရီးအကွာအဝေးကို ပြောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းညွှန်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် ၁ ပြ၊ ၂ ပြ၊ ၃ ပြ…. စသဖြင့် ပြောတတ်ကြတယ်။
မန္တလေးနဲ့ စိမ်းတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီ တစ်ပြနှစ်ပြတွေကို ဘာပြောမှန်း မသိကြဘူး။ တချို့က ကြားဖူးနားဝနဲ့ နားလည်မှုလွဲကြတယ်…
မန္တလေး တစ်ပြဆိုတာ မရေမရာကြီးလိုလို၊ အတိုင်းအဆမဲ့နေသလိုလို၊ အရမ်းကြီး ဝေးနေသလိုလို။ မသိသေးသူတွေ သိသွားအောင် ကျနော်ဖတ်မှတ်သိရှိခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပါမယ်။(မှားတာရှိ ပြင်ပေးပါ)
မန္တလေး ၁ ပြ ဟာ တာ ၅၀ ရှိပါတယ်။ အတိအကျကို တာ ၅၀ ရှိတာပါ။ ရှေးမြန်မာ အတိုင်းအတာအရ ‘တာ ၅၀’ ပါ။ ၁ တာ မှာ ၇ တောင် ရှိပါတယ်။
မြန်မာအတိုင်းအတာ ၁ တောင်ဟာ အင်္ဂလိပ်အတိုင်းအတာ ၁၉လက်မခန့် နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ (တချို့က ၁၈လက်မလို့ ယူကြတယ်)
တာ ၅၀ = အတောင် ၃၅၀ = ၆၆၅၀ လက်မ = ၅၅၄.၁ ပေ။ ၁ ပြ = ၅၅၄ ပေ ပေါ့ (အနီးစပ်ဆုံး)
အဲ့ဒီ တစ်ပြကို တာ ၅၀ က ဘယ်က လာတာလဲ?
မြို့ရိုးကနေ လာတာပါ။ မန္တလေးနန်းမြို့ရိုးဟာ လေးထောင့်စပ်စပ်ပုံသဏ္ဍန် ရှိပါတယ်။ မြိ်ု့ရိုးကို ပစ္စင် ပြအိုး သူရဲခို သူရဲပြေး ရင်းတား စတာတွေနဲ့ ဖွဲစည်း တည်ဆောက်ထားကြတယ်။
မြို့ရိုးတစ်ဖက်ဟာ ‘တာ၆၀၀’ ရှည်ပါတယ်။ တာ ၅၀ တိုင်းမှာ ပြအိုးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြအိုးနဲ့ တည့်တည့်ကို ဦးတိုက်ပြီး မန္တလေးလမ်းတွေကို ဖောက်ထားတာပါ။ (Google map မှာ ကြည့်ရင် သိပါမယ်)
ဒါကြောင့်…တစ်ပြဟာ တစ်လမ်း ပါ။ မြို့ရိုးပေါ်က တစ်ပြနဲ့တစ်ပြ အကွာအဝေးဟာ တစ်လမ်းနဲ့တစ်လမ်း အကွာအဝေးပဲပေါ့။ တစ်လမ်းနှစ်လမ်းမပြောဘူး တစ်ပြနှစ်ပြပဲ ပြောတာ မန္တလေးသား။ (အတူတူကိုး)
မြို့ရိုးတစ်ဖက်မှာ ၁၂ လမ်း ( ၁၂ပြ) ရှိပါတယ်။ မြို့ရိုးနဲ့ ကျုံးကြားက တာ ၂၀၊ ကျုံးအကျယ်က တာ ၂၀ နဲ့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်း ဘာညာသာရကာက ၁၀တာ လောက် ရှိတော့ မြို့ရိုးကနေ နောက်ထပ် တာ၅၀ အကွာမှာ လမ်းတစ်လမ်း ယူထားတယ်။
အဲ့သဟာကြောင့်…ကျုံးတစ်ဖက်စီဟာ ၁၄ လမ်း (၁၄ပြ) ရှိပါတယ်။မြောက်ဖက်ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၁၂ပါတောင်ဖက်ကျုံးဟာ လမ်းနံပတ် ၂၆ ပါ ၁၄ လမ်း ရှိတယ်။ အရှေ့ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၆၆ ပါ အနောက်ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၈၀ ပါ ၁၄လမ်း ရှိပါတယ်။
(တချို့ထင်သလို ကျုံးတစ်ဖက်ဟာ ၂ မိုင် မရှိပါ။ ၁မိုင်ခွဲခန့်သာ ရှိပါမယ်။)
မန္တလေးသားတွေက… တစ်လမ်း နှစ်လမ်း သုံးလမ်းလို့ မပြောဘဲ တစ်ပြ နှစ်ပြ သုံးပြ စသဖြင့် ပြောကြတယ်။ လမ်း နဲ့ ပြ အခေါ် အတူတူပါပဲ။ (မြို့ထဲပိုင်း ပြောတာပါ၊ မြို့သစ်တွေ စက်မှုဇုန်ေ တွထဲမတော့ လမ်းနံမ ည်တွေဟာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေလိုက်တာများ ချီးပုံ ကြက်ယက်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ ပန်းနံမယ်တွေ၊ ရာဇဝင်ထဲက အဘတွေရဲ့ နာမယ်တွေနဲ့ ဘယ်လမ်းဟာ ဘယ်နားရှိမှန်း မန်းလေးသားတွေကို မသိတော့တာ၊ ဇာတ်ပျက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာလေ)
မန္တလေး ၁ ပြ ဟာ တချို့လူတွေထင်သလို မရေမရာ မတိမကျ ဗရမ်းဗတာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁ပြ = တစ်လမ်း = တာ ၅၀ = ပေ ၅၅၀ခန့်
Previous post Wave Money ထုတျလို့ရ တယျဆိုပွီး post တှေ တငျပေးနတေဲ့သူတှကေို သတိ ထားပါ….
Next post ယနခေ့တျေ လူငယျတိုငျး အတှကျ Google ကို ဆရာကကြ ဘယျလိုသုံးကွမလဲ….ဒီမှာကွညျ့လိုကျရအောငျ